Halkee ayuu Ciise ku maqnaa sadex maalin ee u dhaxeyso dhimashadiisa iyo soo laabashadiisa?
Su’aal: Halkee ayuu Ciise ku maqnaa sadex maalin ee u dhaxeyso dhimashadiisa iyo soo laabashadiisa?
Jawaab: Marka koowaad Butros 3:18–19 dhahay, “Masiixi sidoo kale wuxuu la dhibaatooday haljeer oo dambiyada ah, kuwa saxan ee kuwa aan saxneyn, ee noo keeni karo Illaah, la geliyay dhimasho ee dhiiga laakin nolol geliyay ruuxa, ee uu rabo iyo ku dhawaaqay ruuxyada ee xabsiga ku jiro” (ESV). Erayga ruuxa waxaa loola jeedaa ruuxa Masiixi. Isbarbardhiga wuxuu u dhaxeeyaa Dhiigiisa iyo ruuxa, iyo uma dhaxeyso dhiiga Masiixi iyo Ruuxa Quduuska. Dhiiga masiixi ee dhintay, laakin Ruuxiisa wuxuu ku hatay noolaansho.
Marka koowaad Butros 3:18–22 wuxuu ku sharaxay qadka muhiimka ah ee u dhaxeeyo Ciise oo dhibaatoonayo (aayada 18) iyo Amaantiisa (aayada 22). Kaliya Butros ayaa bixiyo warbixin gaar ah ee ku saabsan waxa dhacay inta u dhaxeyso labadaan dhacdo. KJV wuxuu yiri in Ciise “lagu wacdiyay” ruuxyada xabsiga ku jiro (aayada 19). Si kastaba, erayga Gariiga ee la isticmaalay ma ahan erayga Baybalka Cusub ee wacdinta baybalka. Waxay si sahlan micnaheeda yahay “si loogu wacdiyo fariinta”; NIV wuxuu u fasirayaa sida “sameynta ku dhawaaqida.” Ciise wuxuu la dhibaatooday oo ku dhintay istilaabka, Jirkiisa oo la geliyay dhimasho. Laakin ruuxiisa waa la nooleeyay, oo u soo saaray Aabaha (Luukos 23:46). Sida waafaqsan Peter, mararka qaarkood ee u dhaxeeyo dhimashada Ciise iyo soo noolaasnhahiisa Ciise wuxuu sameeyay ku dhawaaqid gaar ah ee “ruuxa xabsiga.”
Baybalka Cusub, erayga ruuxa waxaa loo isticmaalaa inuu sharaxo malaa’ikta ama jiniyada, ma ahan aadanaha. Gudaha 1 Botros 3:20, Peter wuxuu ku tilmaamay dadka sida “ruuxyada” (KJV). Sidoo kale, ma jiraan meel Baybalka ku jiro ee naloo sheegay in Ciise naarta booqday. Falimaha Rasuullada 2:31 wuxuu yiri inuu Aaaday Qabriyada (Baybalka Heerka Amreerikaanka Cusub), laakin Qabriyada ma ahan naar. Qabriyada waa eray loola jeedo, guud ahaan, runta dhimashada, meel ku meel gaar ah halka dhimashada ku sugto soo noolaanshaha. Muujintii 20:11–15 ee NASB iyo NIV waxay cadeysay waxay cadeysaa kala soocida Qabriyada iyo haraha dabka. Haraha dabka waa joogto ah, meesha ugu dambeyso ee xukunka ee kuwa dhumay. Qabriyada waa meel ku meelgaar ah ee labadaba weliga lumay iyo Baybalka Hore.
Illaaheena ayaa ku soo saaro Ruuxiisa Aabaha, jir ahaan dhintay, oo galay janada (Luukos 23:43). Mararka qaarkood ee u dhaxeyso Dhimashadiisa iyo soo naalaanshahiisa, Ciise wuxuu sidoo kale booqday meesha halka uu gaarsiiyay fariinta jiritaanka ruuxa (laga yaabo malaa’ikta soo dhacday; fiiri Yuudas 1:6); jiritaankaan waxay si ula xiriirtay mudddada ka hor fatahaada ee waqtiga Noah (1 Buros 3:20). Butros nooma sheegin wAXA Ciise ku dhawaaqay ee xabsiyeynta ruuxyada, laakin ma noqon karto fariinta madax furashada maadaama malaa’ikta aYSan badbaadeynin (Cibraaniyada 2:16). Waxay laga yaabaa inay aheyd ku dhawaaqida guusha ee dhinaca Sheydaanka iyo marti gelintiisa (1 Butros 3:22; Kolosay 2:15). Efesos 4:8–10 sidoo kale waxay u muuqataa fikrad la xiriirto howlaha Ciise’ ee waqtiga u dhaxeeyo Dhimashadiisa iyo soo noolaanshaha. Xigashada Sabuurradii 68:18, Bawlos wuxuu ka yiri Masiixi, “markii uu kor aaday, wuxuu qaatay maxbuus badan” (Efesos 4:8). ESV waxay gelisay mida Masiixi “hogaamiyo maxaabuus qaabishay.” Tixraaca wuxuu u muuqdaa inuu yahay midaas, janada, Ciise wuxuu usu keenay dhammaan madax furashada ee Halkaas yaalay oo geeyay guRIgooda joogtada ah eE janada.
Waxaan oo dhan dhahitaankeeda, Baybalka si cad uma cado gabi ahaanba waxa dhabtii Ciise uu sameeyay sadexda maalmood ee u dhaxeyso Dhimishadiisa iyo soo naalaanshaha. Ka bilow waxa aan sheegi karno, in kastoo, Uu raaxo geliyay weliga baxay oo keeno gurigooda daa’inka ah, iyo Wuxuu ku dhawaaqay Guushiisa ee in kabadan malaa’ikta soo baxday ee lagu hayo xabsiga. Waxa aan ogaan karno xaqiiqdii waa mida Ciise aanan la siinin qof kale fursad labaad ee badbaadada ah; waxaan wajahnaa xukunka dhimashada kadib (Cibraaniyada 9:27), ma ahan fursad labaad. Sidoo kale, Kuma dhibaatooneynin naarta; Shaqadiisa ee madax furashada waxay ku dhammaatay istilaabka (Yooxanaa 19:30).